Jose Mourinho oo ka hadlay dhaawacyadii xalay soo gaarey Zlatan iyo Rojo
Friday, December 14th, 2018 - 01:00:23
Friday April 21, 2017 - 11:32:27 in Wararka by Kubad Bile
Manchester United macllinkeeda Jose Mourinho ayaa aaminsan dhaawacyada soo gaaray Zlatan iyo Marcos Rojo ineesan eheen mid sahlan.
Rojo ayaa dhaawac la kulmay daqiiqadii 23aad iyadoo Manchester United xalayto ee ciyaaraysay lugtii labaad ee Europa League quarter-finalka.
Ciyaarta 90ka daqiiqo ee loogu tala galay waxee kusoo idlaatay 1:1. taasi waxee ka dhignneed in baahanaayo 30daqiiqo oo dheeri ah.
Balse intaan lagaarin 30daqiiqo oo dheeriga ahaa Manchester United ayaa waxaa dhaawac uu kasoo gaaray Zlatan Ibrahimovic ciyaarta markee eheed 90 daqiiqo+2.
Balse ugu dambayn waxaa dhacday markii lagu daray 30ka daqiiqo. 15ka dambe Marcus Rashford inuu goolka guusha uu u hibiiyo United. Mr Jose Mourinho ayaa ciyaarta kadib wuxuu ka hadlay dhaawacyadda ciyaaryahaanadiisa.
"Ma u malaynaayi inuu yahay dhaawacyo fudud. laakiin waxaan door bidayaa inaan sugo ilaa iyo kadib marka taaritaanka lagu sameeyo Barri" Mourinho ayaa usheegay BT Sports.mar wax laga weydiiyay dhaawacyada kooxdiisa soo gaaray waxa uu ka aamisanyahay. "ma u malaynaayi inee yihiin dhaawacyo fudud. waxaan ahay mid kaxun"
Waxa uu raaciyay shirkiisa jaraa'id: "Waxaan doonayaa inaa sugo. laakiin waxaan dareemayaa ineesan wanaagsaneen labadooda.Waxaan doonayaa in aan sugo. waxaan doonayaa inaan isku dayo inaan noqdo mid niyadsan. laakiin ma ihi"
W/ D: Owzebio